ဂျပန်နိုင်ငံက အလှဆုံးသော ရွာ (၇) ရွာ Japan List
Japan List > ဂျပန်နိုင်ငံက အလှဆုံးသော ရွာ (၇) ရွာ
ဂျပန်နိုင်ငံက အလှဆုံးသော ရွာ (၇) ရွာ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ရွာအဆင့်၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်အဆင့်ထိ အဆင့်ဆင့် ပံ့ပိုးကူညီရန် ၂၀၀၅တွင် ဂျပန်နိုင်ငံက အလှဆုံးသောရွာများ လို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တည်ထောင်ထားပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ စာရင်းထဲမှာပါတဲ့ ရွာများစွာထဲမှ စာဖတ်သူများအတွက် ရွာ (၇)ကို ထပ်ဆင့်ရွေးပေးထားပါတယ်။ ဂျပန်မြို့ပြဘ၀အကြောင်း လေ့လာပြီးရင် ဝေးလံတဲ့ ရွာများရဲ့ ချစ်စဖွယ် အလှအပလေးတွေလည်း လေ့လာရအောင်နော်။
၁။Tarama ရွာ [Okinawa ပြည်နယ်]
Miyako District ခရိုင် Okinawaပြည်နယ်ရဲ့ တောင်ပိုင်းတွင်ရှိတဲ့ ရွာဖြစ်ပါတယ်။ Taramaရွာဟာ ကျွန်း နှစ်ခု ပေါင်းပြီးတည်ထားတဲ့ သုခဘုံနန်းကလေး တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ဘက်တွင် အာရှပစိဖိတ်ပင်လယ်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် တရုတ်ပင်လယ်တွေ ၀ိုင်းရံထားတဲ့ သဘာဝအလှကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးသူများအတွက် မဖြစ်မနေသွားသင့်သောနေရာလေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။[caption id="attachment_2356" align="aligncenter" width="620"] Credit: www.flickr.com[/caption]ဆက်သွယ်ရန်။လိပ်စာ။Tarama ရွာ, မြို့တော်ဝန်ရုံး, 99-2 Nakasuji, Tarama-son, Miyako-gun, Okinawa-ken 906-0602လမ်းကြောင်း: Miyako လေဆိပ်ထိအရင်သွား။ Tarama ကွန်းသို့ လေယဉ်၊ သဘောင်္ဖြင့် ခရီးဆက်လို့ရသည်။လည်ပတ်သင့်သောရာသီ။ ဘယ်ရာသီမဆိုအဆင်ပြေအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးဖုန်း။ 0980-79-2011
၂။ Tōhō ရွာ [Fukuoka ပြည်နယ်]
Fukuoka ပြည်နယ်, Asakura ခရိုင်တွင် မကြာသေးသော ကာလတွင် တည်ထားတဲ့ ရွာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တန်းကြီးများဝန်းရံလျက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းသောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ကာ လက်မှုထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ စဉ့်အိုးလေးတွေဟာလည်း ဆွဲဆောင်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စပါးစိုက်ထားတဲ့ လယ်မြေတွေဟာ စိမ်းစိုရင်း ရိတ်သိမ်းချိန်မှာလည်း ရွေရောင်လိုဝင့်ဝါနေတာဟာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။[caption id="attachment_2355" align="aligncenter" width="600"] Credit: www.japanvillage.jp[/caption]ဆက်သွယ်ရန်။လိပ်စာ။Toho ရွာ, 838-1692 941-9 Oaza-Koishiwara, Toho Village, Asakura-gunလမ်းကြောင်း:။ကုန်းလမ်း။ Tenjin ဘတ်စ်ဂိတ်/Hakata ဂိတ်/Fukuoka လေဆိပ်များမှ, Nishi-tetsu အဝေးပြေးကား ကနေတဆင့် Hakiမှဆင်း (မိနစ် ၆၀). Nishi-testu ဘတ်စ်ဂိတ်မှ Koishiwara ထိ (မိနစ် ၄၀)လည်ပတ်သင့်သောရာသီ။ ဘယ်ရာသီမဆိုအဆင်ပြေအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးဖုန်း။ 0946-74-2311
၃။ Umaji ရွာ [Kochi ပြည်နယ်]
စိမ်းစိုနေတဲ့ သစ်တောများဝန်းရံထားတဲ့ ရွာဖြစ်တာကြောင့် ရွာမရောက်ခင်မှာတောင် လတ်ဆတ်တဲ့လေအေးလေတွေင်ကို ရှုရှိုက်ရင်း လန်းဆန်းမှာကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Yuzu ဆိုတဲ့ထွက်ကုန်ကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးတဲ့ရွာဖြစ်ပြီး ၁၉၉၇ကတည်းက နှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့ “မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ ခရီးစဉ်” ကလည်း ပိုပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ စေပါတယ်။ ဖော်ရွေတဲ့ ရွာသားတဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေး အရသာရှိလှတဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ သင့်ကိုအမြဲစွဲဆောင်နေမှာပါ။[caption id="attachment_2354" align="aligncenter" width="620"] Credit: www.flickr.com[/caption]ဆက်သွယ်ရန်။လိပ်စာ။Umaji ရွာ, 443 Umaji, Umaji-mura, Kōchi-ken 781-6201လမ်းကြောင်း: Kochi မြို့မှ ကီလိုမီတာ (၇၀)(၁နာရီနဲ့ မိနစ်၄၀)မြို့ပတ်ရထား JR သိုမဟုတ် Tosa Kuroshio ရထားလိုင်း: Kochi Station ဘူတာမှ, JR စီးပြီး Yasuda ဘူတာတွင်ဆင်း (၁ နာရီ ၂၅မိနစ်)လည်ပတ်သင့်သောရာသီ။ ဘယ်ရာသီမဆိုအဆင်ပြေအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးဖုန်း။ 0887-44-2111
၄။ Soni ရွာ [Nara ပြည်နယ်]
Uda ခရိုင်၊ Nara ပြည်နယ်၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိပြီး လွင်ပြင်တစ်ခုတွင် တည်ထားတဲ့ (Kansai နယ်အတွင်း)Soniရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုက မပိုမအေး ဖြစ်ကာ တောင်တက်ဝါသနာပါသူများအတွက် အထူးလိုက်ဖက်လှပါတယ်။ စက်ရုံကြီးကြီးတွေ၊ ရုပ်ဆိုးတဲ့ ထပ်မြင့်တိုက်တာတွေရှိမနေပဲ လှပစိတ်းစိုတဲ့ ကွင်းပြင်ကျယ်တွေနဲ့ နှစ်သက်စရာကောင်းလှပါတယ်။[caption id="attachment_2353" align="aligncenter" width="620"] credit:Wikimedia Commons[/caption]ဆက်သွယ်ရန်။လိပ်စာ။Soni ရွာ, 495-1 Ōaza Imai, Soni-mura, Uda-gun, Nara-ken 633-1212လမ်းကြောင်း။ဘတ်စ်: Kintetsu Nabari ဂိတ်ကနေTaraji မှာဆင်း. ကားဂိတ်မှ မိနစ် ၅၀ခန့်လျှာက်။ နွေဦးရာသီနှင့် ရုံးပတ်ရက်များတွင် Kintetsu Haibara ဂိတ်မှ Soni Plateau ထိ ဘတ်စ်ကား စီစဉ်ထား။လည်ပတ်သင့်သောရာသီ။ ဘယ်ရာသီမဆိုအဆင်ပြေအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးဖုန်း။ 0745-94-2101
၅။ Shirakawa ရွာ [Gifu ပြည်နယ်]
Shirakawaရွာဟာ Ono ခရိုင်မှာရှိတဲ့ ရိုးရာရွာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တောတောင်တွေနဲံ ဖုံးလွမ်းတဲ့ Japan နိုင်ငံရဲ့ အလယ်မှာ ရှိပါတယ်။ ၁၉၉၅တုန်းက UNESCOကနေ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရပါတယ်။ gasshō zukuri လို့ခေါ်တဲ့ လယ်တောအိမ်ကြောင့် ပိုပြီးနာမည်ကြီနေပါတယ်. gasshō zukuriကို စကားလုံးအတိုင်း ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ “ဆက်တောင်းတဲ့လက်ကဲ့သို့တည်ဆောင်ခြင်း” လို့အမည်ရပါတယ်။ အိမ်တွေရဲ့ ခေါင်မိုးပုံစံတွေကြောင့် ဒီနာမည်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဒီဇိုင်းထုတ်ရခြင်းကလည်း ဆောင်ရာသီမှာကျတတ်တဲ့ နှင့်ခဲတွေအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ခန့်ကတည်းက သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခေါင်မိုးမှာလည်း တွေကို စိုက်ထားလို့ရပါတယ်။[caption id="attachment_2352" align="aligncenter" width="940"] Credit: www.flickr.com[/caption]ဆက်သွယ်ရန်။လိပ်စာ။Shirakawa ရွာ, #501-56 Hatotani-517 Shirakawa-Village Ohno-District Gifu Pref.လမ်းကြောင်း:။ရထား (သို့) ကား။တိုကျိုမှ Nagoya ထိ (၂ နာရီ) ပြီးတော့Takayama ထိစီး(၂ နာရီ)။ Shirakawa-go အထိ ကားဆက်စီလို့ရပါတယ် (မိနစ် ၅၀)လည်ပတ်သင့်သောရာသီ။ ဘယ်ရာသီမဆိုအဆင်ပြေအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးဖုန်း။ +81-05769-6-1311
၆။ Akaigawa ရွာ [Hokkaido ပြည်နယ်]
Yoichi ခရိုင်တွင်ရှိပြီး ဆောင်းရာသီတွင် စကိတ်စီးတာ ၀ါနာပါသူများအတွက် အထူးကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်ပြီး အခြားရာသီများတွင် တောတောင်ထဲ လည်ပတ်ချင်သူများ၊ တောင်တက်တာဝါသနာ ပါသူများအတွက် အင်မတန်မှ ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။[caption id="attachment_2351" align="aligncenter" width="940"] Credit: Wikimedia Commons[/caption]ဆက်သွယ်ရန်။လိပ်စာ။Akaigawa ရွာ, 74-2 Akaigawa, Yoichi-gun, Hokkaido 046-0592လမ်းကြောင်း။ကားလမ်း: Sapporo ကနေ မိနစ် ၉၀ (၇၀ km) – Yoichi-cho မှ မိနစ် ၂၀ (၁၃ km) – New Chitoseလေဆိပ်မှ ၂ နာရီ (၁၂၀ km) – Kutchan မှ မိနစ် ၄၀ (၃၃ km)လည်ပတ်သင့်သောရာသီ။ ဘယ်ရာသီမဆိုအဆင်ပြေအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးဖုန်း။ 0135-34-6211
၇။ Higashinaruse ရွာ [Akita ပြည်နယ်]
Akita ပြည်နယ်၏ အရှေ့တောင်ပိုင်တွင်ရှိပြီး Edoခေတ်တွင် ဆာမူရိုင်းမျိုးနွယ်များထဲမှ Satakeအမျိုးများ စိုးမိုးခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိမ်းစိုတဲ့ရာသီဥတုကြောင့် ငှက်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာ ကျက်စားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။[caption id="attachment_2350" align="aligncenter" width="618"] Credit: www.murakara.com[/caption]ဆက်သွယ်ရန်။လိပ်စာ။Higashinaruse ရွာ, Yubinbango 019-0801 Akita Prefecture ogachi district higashinaruseလမ်းကြောင်း:ရထား: Jumonji ဘူတာမှ ၂၄ မိနစ်ခန့်။ 24 minutes to go there by trainလည်ပတ်သင့်သောရာသီ။ ဘယ်ရာသီမဆိုအဆင်ပြေအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးဖုန်း။ (0182) 47-3401
View 4569 ဂျပန်နိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသည့် နာမည်အကြီးဆုံးနေရာ (၅)ခု